Warbixin ku saabsan kulanka Somalia vs eSwatini & sababta loo geliyey isreebreeb-horaadka (Goorta la dheelayo?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Warbixin ku saabsan kulanka Somalia vs eSwatini & sababta loo geliyey isreebreeb-horaadka...
Warbixin ku saabsan kulanka Somalia vs eSwatini & sababta loo geliyey isreebreeb-horaadka (Goorta la dheelayo?)
(Hadalsame) 21 Jan 2022 – Waxaa la sameeyey isku aadka isreebreeb-horaadka Koobka Qaramada Afrika ee AFCON oo sanadka soo aaddan lagu qaban doono dalka Cote D’Ivoire 2023 waxaana lagu sameeyey magaalada reer Cameroon ee Douala.
Xulka haatan wacdaradaha ka dhigaya AFCON ee Gambia ayaa lagu aaddiyey Chad halka Sao Tome iyo wajahayso Mauritius. Djibouti ayaa la ciyaaraysa South Sudan iyadoo Lesotho lagu beegay Seychelles.
Dalkeenna Somalia ayaa lagu aaddiyey xulka Boqortooyada eSwatini ama ex Swaziland, waxaana kulamadan labadooda lugood la kala ciyaari doonaa 21 iyo 29-ka Maarso, 2022.
Sidoo kale kulamada kala baxa ah ee Afrika ee Koobka Adduunka 2022 lagu qabanayo Qadar ayaa berri oo Sabti ah dhacaya.
Previous article3-da dhinac ee ay eeddu ka saaran tahay jahawareerka doorashada Somalia (Mid Rooble la gudboon hadda)
Next articleTaariikh dhexmartay laba dal oo Somalia saaxiib la ah oo tusaale wayn u noqon karta hoggaan kasta